Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Roobabkii Dayrta oo deegaanka wada gaadhay
Roobabkii Dayrta oo deegaanka wada gaadhay
October 31, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
XOL:Wararka naga soo gaadhaya Deegaanka guud ahaan ayaa sheegaya in roobabkii dayrtu ay si wanaagsan oo siman uga curteen deegaanka oo dhan si aad ahna loogu qabawsadey iyadoo togaggii, farqihii, baliyadii iyo dhamaan galshooyinkiiba ay buuxsameen ama ay gabiyaha jabiyeen si aad ahna loogu qabawsadey.
Wabiga Shabeele ayaa lagu soo waramayaa inuu aad ubuuxsamay meesha togagga Faafan, Daakhato iyo Jararna ay socdaan iyagoo ciiraya. Magaalada Dhanaan oo ah magaalo ay kusoo biya shubaan todobo laagood oo biyaha ka keena dhul dheer ayaa jabiyay gabiyada kadibna waraabiyay dooxada Dhanaan dadkuna ay sugayaan in biyuhu ka qalalaan si ay miigaha ugu boobaan.
Togga Faafan ee soo mara magaalada Qabridahare ayaa ku baxay magaalada iyadoo biyahani aysan gaadhin meel aysan gaadhin inta la xasuusto dadkuna ay isugu urureen meelaha taagyada ah.
Inkastoo aan lasoo sheegin dhibaatooyin badan oo ay roobabku keeneen ayaa haddana wararka naga soo gaadhaya magaalada Qabridahare ayaa sheegaya in ilmo yar oo Wiil maydkiisa laga heley togga Faafan loona badinayo in ilmahani togga meel baadiyaha kasoo raacay lamana oga illaa iyo hadda waalidkii ilmahan.
Raxmadda eebbe ayaa si aad ah loogu diirsadey iyadoo deegaanku guud ahaan ku jiro xiligii ugu wanaagsanaa siyaasad ahaan, nabad iyo hormarba illaahayna ha ugu wado hana u dhameystiro.